IMDB: 7.0/10 181,528 votes
Head-On (2004) Head-On 2004===========#UnicodeIMDb 8/10တူရကီနှယျဖှား ဒါရိုကျတာ Fatih Akin ရဲ့ လကျရာကောငျးတဈခုပါ။ ဒီကားက Goden Bear, European Film Award For Best Film အပါအဝငျ ဆုပေါငျး ၁၁ ခုကို ဆှတျခူးခဲ့တဲ့ကားပါ။ လူတှကေ အခဈြကို ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ တှရှေိ့လရှေိ့ကွပါတယျ။ ဂြာဟဈ(ကာဟဈ) နဲ့ ဆီဘယျတို့ တှဆေုံ့ရပုံက အမှတျမထငျ တှဆေုံ့မှုမြိုးပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုသတျသကွေလို့ ဆေးရုံရောကျသှားရငျးတှခေဲ့ကွတာပေါ့။ ပွောရရငျ ဂြာဟဈက တှတေ့ာမဟုတျပဲ ဆီဘယျက စပွီး သတိထားမိသှားတာ။ ဂြာဟဈ (ကာဟဈ) တှမျရှတျချဆိုတဲ့ နာမညျကွားတော့ ဆီဘယျတဈယောကျအရမျးပြျောသှားပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျ လကျထပျဖို့ကိုလညျး ဆီဘယျကပဲ ဂြာဟဈကို ခကျြခငျြးဆိုသလို တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဂြာဟဈကို ခဈြလို့တော့မဟုတျပါဘူး ဂြာဟဈက တူရကီဖွဈနလေို့ပါပဲ။ ဂြာဟဈလို ဂလဂေခြေ ပုလငျးခှံတှေ လိုကျကောကျပေးရတဲ့သူနဲ့ ဘယျသူက လကျထပျခငျြမှာလဲ။ ...
Mido Turbulent Woman Teacher Tennis-slave Camp unicode DarkSide Fan တှေ အတှကျ Dark Knight နဲ့ XCode တို့ ထပျမံ တငျဆကျလိုကျတာကတော့ တငျးနဈအားကစား နညျးပွ ဆိုတဲ့ ဇတျလမျးလေးပါပဲ နာရှီရာမာ ဆိုတဲ့ တငျးနဈခြံပီယံဟောငျး မိနျးမခြောလေးဟာ အမြိုးသမီးသီးသနျ့ ကမျ့သှငျးလကေ့ငျြ့စခနျး ကို နညျးပွအဖွဈ အထကျက တာဝနျအရပေးပို့ခွငျး ခံလိုကျရပါတယျ တဈခုရှိတာက အသမေောငျးတယျဆိုတဲ့ အရငျနညျးပွဟောငျး နဲ့ စတငျပွီး အကြိတျအနယျ ယှဉျပွိုငျရတာပဲ နတော ကွာလလေေ တဈဖွေးဖွေးသိသာလာတာကတော့ ဒီကြောငျးမှာ လိငျမှုကိစ်စ ဆျောကားခံနရေတဲ့ ပွသနာကို သိလာပွီး ဆရာမ တဈယောကျ အနနေဲ့ ဖျောထုတျဖို့ ကွိုးစားခဲ့သော အခါမှာတော့.... ဒီ ဆယျ့ရှဈပလပျ ကားလေးကို အားဆေးတှသေောကျ ကွကျဥတှေ အစိမျးစားပွီး ဘာသာပွနျပေးထားတာကတော့ Dark Knight ဖွဈပွီး XCode မှ ရတှေငေတျပွီး တငျဆကျပေးထားပါတယျ Dark Side Fan အစဈတှေ ကတော့ ခကျြခငျြးကို Download ဆှဲပွီး ကွညျ့တော့မယျဆိုတာသိနပေါပွီ....zawgyi DarkSide Fan တွေ အတွက် Dark Knight နဲ့ ...
Mido Turbulent Woman Teacher Tennis-slave Camp
The Shining (1980) The Shining (1980) IMDb - 8.4/10_____Rotten - 84% Unicode ********** CM ပရိသတျကွီးကို ၁၉၈၀ ခုနှဈက အရမျးအောငျမွငျခဲ့တဲ့ Drama/ Horror ဇာတျကားတဈကားကို တငျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ ဒီဇာတျကားဟာ နာမညျကြျော The Shawshank Redemption ဇာတျကားရဲ့ မူရငျးစာရေးဆရာ Steven King ရဲ့ နာမညျကြျော စာအုပျတဈအုပျကို ရုပျရှငျအဖွဈပွနျလညျ ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ Rating အရ IMDb 8.4/10 နဲ့ RT 84% ရရှိခဲ့တာပါ။ Old but Gold ပါပဲ.... ဇာတျလမျးကတော့........... ဘဝမှာ အောငျမွငျမှုမရခဲ့တဲ့ ကြောငျးဆရာလူထှကျ ဖခငျတဈယောကျ... ခငျပှနျးနဲ့သားကို ခဈြတတျလှနျးတဲ့မိခငျတဈယောကျ.... ထူးခွားတဲ့ပါရမီတဈခုကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ခဈြရာကောငျးတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျ..... အဲဒီသုံးယောကျပေါငျးစပျထားပွီး မပွညျ့စုံတဲ့ မိသားစုတဈခုဟာ မကွာသေးမီအခြိနျကပဲ ဆိုးရှားတဲ့ လူသတျမှုတဈခု ဖွဈပှားခဲ့တဲ့၊ ရာသီဥတုဆိုးတဲ့ဆောငျးတှငျး ကာလမှာ ပိတျထားရပွီး အငျဒီးယနျးတှရေဲ့ သုဿနျမွဟေောငျးပျေါမှာ တညျဆောကျထားတဲ့ ကျောလိုရာဒိုက ရှေးဟောငျးဟိုတယျတဈခုမှာ ဆောငျးတှငျးဘကျ ဟိုတယျအစောငျ့ အလုပျကို လကျခံခဲ့ပွီးတဲ့နောကျမှာတော့........ ဒီဇာတျကားမှာ အျောစကာဆုအတှကျ ရာထားခံရမှုအမြားဆုံးနဲ့၊ အျောစကာဆု ၃ ဆု ဆှတျခူးခဲ့သူဖွဈတဲ့ Jack Nicholson က ခေါငျးဆောငျပါဝငျထားပွီး ...
IMDB: 8.4/10 873,287 votes
IMDB: 7.1/10 15,469 votes
Police Story 3: Super Cop (1992) Police Story ဆိုတာနဲ့ မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်းဇာတ်ကားတွေမှန်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Police Story နာမည်နဲ့ ဂျက်ကီချန်းဇာတ်ကား ၆ ကားထွက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အစဉ်လိုက်ဖြစ်အောင် တင်ဆက်သွားပါ့မယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့.... တရုတ်ပြည်မကြီးက လူဆိုးဂိုဏ်းကို ဖြိုခွင်းဖို့ ဟောင်ကောင်ရဲတွေက ထိုးထည့်လိုက်လို့ ဂျက်ကီချန်းတစ်ယောက် အူကြောင်ကြောင်နဲ့ တရုတ်ပြည်ရောက်လာရာက စပါတယ်။ မင်းသမီးကတော့ မီရှဲယိုပါ။ ရှေ့ကဇာတ်ကားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့်လဲ တချို့နေရာတွေမှာ အတော်လေးရယ်ရပါတယ်။ IMDb rating (6.9/10) ရရှိထားပါတယ်။ နောက်ထပ်လာမယ့် Police story ဇာတ်ကားတွေကိုလဲ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦး။ Encoded By : XCode
IMDB: 6.9/10 17,974 votes
Police Story 4: First Strike ဟောင်ကောင်ရဲအရာရှိ Chan Ka Kui အဖြစ် Police Story ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့ရာမှာ ဒီဇာတ်ကားလဲ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းကြိုက်ခဲ့ပြီး အခုချိန်ပြန်ကြည့်တော့လဲ ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပဲ ကြိုက်နေမိတုန်းပါပဲ။ မိတ်ဆွေတို့လဲ နှစ်သက်နေဦးမှာပဲလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ Action, Adventure, Comedy အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး IMDb Rating (6.6/10) ရရှိထားပါတယ်။ ဂျက်ကီချန်းဇာတ်ကားတွေမှာ သူ့ကို ဖိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ်မြင်ရပေမယ့် သူကမြင်နေကြ တစ်ခြားဖိုက်တာတွေနဲ့မတူပါဘူး... သူ့မှာ လှည့်စားခြင်းကင်းတယ်... သူတစ်ပါးကို အနိုင်ကျင့်လိုစိတ်ကင်းတယ်.. .ပြောရရင် အရိုးခံဖိုက်တာမျိုးပါ... ဒါကြောင့်သူ့ဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ရတာ ဖိုက်တာခန်းတွေပါနေပေမယ့် အဆိပ်အတောက်ကင်းပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ခံစားရပါတယ်။ သူ့မျက်နှာမှာကို အာရှသားတွေရဲ့ အရိုးခံ ဖြူစင်တဲ့အရိပ်အယောင်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ (ဂျက်ကီချန်းဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာသဘောကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။) Encoded By : XCode
IMDB: 6.6/10 17,888 votes
New Police Story (2004) Police Story ဆိုတာနဲ့ မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်းဇာတ်ကားတွေမှန်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Police Story နာမည်နဲ့ ဂျက်ကီချန်းဇာတ်ကား ၆ ကားထွက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အစဉ်လိုက်ဖြစ်အောင် တင်ဆက်သွားပါ့မယ်။ ဒီဇာတ်ကားကတော့....Police Story ထဲမှာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားလို့ သတ်မှတ်ထားကြတာနဲ့အညီ IMDb Rating (7/10)ထိရရှိထားပါတယ်။ တင်ပြီးသမျှ Police Story ဇာတ်ကားများကို Encoded By : Xcode
IMDB: 7.0/10 23,318 votes
Police Story : Lock Down ( 2013 ) 2013 ခုနှစ်က ထွက်ထားတဲ့ Police Story ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် မင်းသားကြီးဂျက်ကီချန်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Imdb 6.1 ရရှိထားပါတယ် အက်ရှင်ကြိုက်ပရိတ်သတ်တို့အတွက် နှစ်သက်မယ့်ကားကောင်းပါပဲ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းလေးကတော့ သမီးဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံရန်ဘားကိုရောက်လာတဲ့ ရဲအရာရှိ ကျုံးဝမ်တစ်ယောက် ဘားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲ..မမျှော်လင့်ပဲ ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရတယ်..တခြားသောပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့သူတွေလည်း ရှိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်..ဒီအမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိမှာလဲ ကျုံးဝမ်နဲ့ဘယ်လိုတွေပတ်သတ်နေတာလဲဆိုတာတော့ Spoil မဖြစ် အောင် အညွှန်းကိုလျော့လိုက်ရပါတယ် ဂျက်ကီချမ်းကားဖြစ်တဲ့အညီ ထွေထွေထူးထူးညွှန်းစရာမလိုတဲ့ အက်ရှင် ဒရာမာ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Translated & Review By Ei Pyae Encoded By Xcode
IMDB: 6.1/10 7,922 votes
[21+] She’s JustaShadow (2019) ရှညျရှညျဝေးဝေးတော့ မပွောတော့ဘူးဗြာ ဂပြနျကား အင်ျဂလိပျစကားပွော ဇတျလမျး အညှနျးကို ပွောရရငျ နညျးနညျးထူးဆနျးမယျ ဒီရုပျရှငျကားက 21+ လို့ ပွောလို့ရတယျ Uncensored ပဲ အကုနျ အရှငျးတိုငျး ပွလို့ အတျောလနျ့ရတယျ မိသားစုနှငျ့ အတူမကွညျ့ပါနဲ့ ယောင်ျကြားလေး ၂၁ ယောကျ စုကွညျ့ပါ ၂၁ ယောကျ မပွညျ့ရငျ ကြိနျစာသငျ့ပါမယျ :P ဇတျလမျးထဲမှာတော့ ဇိမျမယျတှေ ရှိတဲ့ အိမျကွီးတဈခုရယျ ဂိုဏျးစတား တဈဖှဲ့ရယျ ကွားထဲကို ဝငျရှုပျမိတဲ့ လူတဈယောကျ ကနေ စရာမှာပဲ အဲ့ဒီလူကလဲ သူပဈမှတျထားတဲ့ ကောငျမလေးတှကေို ပွနျပေးဆှဲ မုဒိနျးကငျြ့ပွီး သကျပဈနတေဲ့ ဖမျးမမိတဲ့ ကှငျးဆကျလူသတျသမား.. သူဇယား သှားရှုပျမိတာက ဂိုဏျးစတား တဈခု ဘယျလို ဘယျပုံ ဆိုတာတော့ ကိုယျ့ဘာသာ ကွညျ့ကွ ကောငျမလေးတှေ ဖငျြလေးတှေ လုံးတာတော့ အာမခံတယျ ကနျြတာတော့ မသိဘူး... ကွညျ့ခငျြကွညျ့ မကွညျ့ခငျြနေ Translator အသဈလေး Sunday Cum က Sunday မှာ ၁၈ ပလပျအပေါငျး သူတျောကောငျးအတှကျ ဘာသာပွနျ တငျဆကျပေးလိုကျပါပွီ။ အညှနျးရေးပွီး Encode ပေးတာကတော့ ကနြျော XCode ...
[21+] She’s JustaShadow (2019)
Annabelle Comes Home (2019) ဒီဇတ်လမ်းမှာတော့ နာမည်ကျော် အန်နာဘယ် အရုပ်ကို လော်ရိန်း တို့ ဇနီးမောင်နှံက နောက်ဆုံးအခြောက်လှန့်ခံရတဲ့ သူတွေဆီကနေ တောင်းယူလာပြီး သူတို့ အိမ် အောက်ထပ်က မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို အစီအရင်တွေနဲ့ ချူပ်နှောင်တဲ့အခန်းမှာပဲ မှန်သေတ္တာနဲ့ သော့ပိတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်.... လော်ရိန်းမှာ ဂျူဒီ ဆိုတဲ့ သမီးလေး တစ်ယောက် ရှိပြီး ဂျူဒီဟာလဲ လော်ရိန်းလို မွေးရာပါ စိတ်စွမ်းအင်ရှိသူဖြစ်ပါတယ် မကြာခဏ ဆိုသလို သေပြီးသားလူတွေကို ခဏခဏ မြင်ရတက်ပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့ ၀ါရန်း လင်မယားဟာ အမှုကိစ္စတစ်ခုအတွက် ခရီးတစ်ခု ထွက်ရမှာဖြစ်လို့ သမီးလေး ဂျူဒီ ကို ကြည့်ရှုဖို့ အရင်ကလဲ ခေါ်နေကြဖြစ်တဲ့ ကလေးထိန်း အချိန်ပိုင်းလုပ်တဲ့ သက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ မယ်ရီအယ်လန် ကို အိမ်ခေါ်ပြီး အပ်ထားခဲ့ကြတယ်.. ဒီကြားထဲမှာပဲ ပရလောက ကိုစပ်စုတက်တဲ့ ဒန်နီရယ် ဆိုတဲ့ မယ်ရီ ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးက ၀ါရန်းမိသားစု ရဲ့ လျို့ဝှတ်ခန်းဆိုတာကို ကြားပဲ ကြားဖူးပြီး အရမ်းအင်မတန် ရောက်ချင် တွေ့ချင်စိတ် ရှိသူဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် ကလေးထိန်း လုပ်နေတဲ့ မယ်ရီကို ကပ်ပြီး ဂျူဒီလေး ရဲ့ မွေးနေ့ကို အကြောင်းပြကာ ...
Toy Story4(2019) ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေထဲမှာ တွိုင်းစတိုရီကို မကြည့်ဖူးဘဲ ကြီးပြင်းလာတဲ့သူဆိုတာ အတော်ရှားပါလိမ့်မယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက တွိုင်းစတိုရီကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်အရုပ်လေးတွေ ဘယ်လိုများ အသက်ဝင်မလားမလဲတောင် ချောင်းကြည့်ဖူးကြတဲ့သူတွေ ရှိမလားမသိဘူး။ ဝုဒီတို့ ဘက်ဇ်တို့နဲ့ မိတ်ဆွေတစ်သိုက်ဟာ မိတ်ဆွေတွေတိုးရင်း စွန့်စားခန်းတွေ ဖွင့်ရင်း နေလာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းတွေ ကြာလာခဲ့ပါပြီ။ အရုပ်တွေအတွက်သူတို့ရဲ့ ပိုင်ရှင် ကလေးငယ်ဆိုတာ ဘဝကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပိုင်ရှင်တွေရဲ့ သက်တမ်းက တိုတောင်းပါတယ်။ သေဆုံးသွားတာ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာ အရုပ်တွေကို စွန့်ပစ်ကြတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားကလေးကို ပေးပစ်ကြတာတွေ လုပ်ကြတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ဘိုပိ ဟာလည်းအခြားပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဆီကို ရောက်သွားပြီး ဝုဒီတို့နဲ့ ကွဲကွာသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း အန်ဒီဟာ ဘွန်နီဆိုတဲ့ ကလေးမလေးဆီကို သူ့ရဲ့အရုပ်တွေ ပေးပစ်လိုက်တာကနေ စတင်ပါတယ်။ ဘွန်နီဟာ အရုပ်လေးတွေကိုချစ်ပြီး နေ့တိုင်းကစားတတ်ပေမယ့် သူ ရွေးနေကျမဟုတ်ဘဲ ချန်ထားခဲ့တဲ့ အရုပ်လေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ တစ်ချိန်က အန်ဒီရဲ့ အချစ်တော် ဝုဒီလည်း ပါနေတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ဘွန်နီလေး ပထမဆုံး မူကြိုကို ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ သွားရင်းနဲ့ ဇွန်းခရင်း တစ်ခါသုံးလေးကို ဖော့ကီဆိုတဲ့ အရုပ်အဖြစ် ဖန်တီးလိုက်မိပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ခရင်းရုပ်လေးက ဘွန်နီရဲ့ မူကြိုကျောင်းမှာ အားပေးမယ် အဖော်လေးဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဖော့ကီဟာ မထင်မှတ်ဘဲ ဘွန်နီနဲ့ ကွဲကွာသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဝုဒီဟာ ဖော့ကီကို ...
Cast Away (2000) 2000 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Cast Away ဇာတ်ကားမှာဆိုရင် မင်းသားကြီး Tom Hank ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့ပြီး ဒီဇာတ်ကားဟာ. အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့ပါတယ် ပါဝင်ရိုက်ကူးသမျှ ဇာတ်ကားတိုင်းကို အောင်မြင်စေသည့် မင်းသားတစ်လက်ဟုပင် တွမ်ဟန့်ခ်စ်ကို ညွှန်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်... Forrest Gum၊ Big၊ Sleepless in Seattle၊ Apollo 13၊ Saving Private Ryan၊ Catch Me If You Can၊ The Green Mile၊ Cast Away၊ Toy Story အစရှိသည့် ဇာတ်ကားများတွင် ဟန့်ခ်စ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယင်းရုပ်ရှင်များ ရုံတင်ရာမှ ရရှိသည့် ရုံဝင်ကြေးသည် အမေရိကန် တစ်နိုင်ငံတည်းတွင်ပင် ဒေါ်လာ ၄.၂ ဘီလီယံမျှ ရှိခဲ့ပါတယ်.. တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနှင့် ဆိုလျှင်မူ အဆိုပါ ငွေပမာဏ၏ နှစ်ဆအထိ တိုးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်... အော်စကာနှစ်ဆုရှင် ဟန့်ခ်စ်ကို ဟောလိဝုဒ် သမိုင်းတွင် အကျိုးအမြတ် အဖြစ်ထွန်းဆုံး စာရင်းဝင် မင်းသားတစ်လက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပြီး သူ့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝမှုမှာမူ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၃၅၀ ကျော်မျှ ရှိပါတယ်... Cast Away ကြည့်ခဲ့သမျှတွေထဲက စိတ်ထဲ ...
Three Colours: Blue (1993) Three Colours: Blue (1993) IMDb - 7.9/10_____Rotten - 98% ကြှနျတျောတို့အားလုံးဟာတဈခါတဈလမှောတော့ တကယျ့လကျတှဘေ့ဝကနထှေကျပွေးခငျြနမေိကွပါတယျ ကြှနျတျောတို့လိုပဲဂြူလီဟာသူရဲ့လကျတှဘေ့ဝဖွဈတဲ့ ပကျြစီးနတေဲ့မိသားစုဘဝကနထှေကျပွေးနခေဲ့ပါတယျ သူ့တိုကျခနျးထဲမှာပဲသူ့ကိုယျသူပွနျပိတျထားပွီး နာကငျြခံစားလို့ရသမြှကိုသူတဈယောကျတညျးသာကွိတျမှိတျပွီးခံစားခငျြတာပါ ဒါပမေယျ့လူတှနေဲ့တော့သူမဟာလုံးဝမထိတှေ့၊မဆကျဆံခငျြတော့ပါဘူး အဲဒီလိုစိတျခံစားခကျြတှကေိုဆနျ့ကငျြနတောကတော့ ပဲရဈရဲ့လမျးသှယျလေးတှပေဲဖွဈပါတယျ သိပျမကွာခငျမှာပဲသူမဟာသူငယျခငျြးဟောငျးဖွဈသူအိုလီဗီယာနဲ့ ပွနျတှမေိ့ရာကနတေကယျ့လကျတှဘေ့ဝကိုပွနျရောကျလာမလား ဆကျပွီးထှကျပွေးနမေလားဆိုတာ... ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတစ်ခါတစ်လေမှာတော့ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ကနေထွက်ပြေးချင်နေမိကြပါတယ် ကျွန်တော်တို့လိုပဲဂျူလီဟာသူရဲ့လက်တွေ့ဘ၀ဖြစ်တဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့မိသားစုဘ၀ကနေထွက်ပြေးနေခဲ့ပါတယ် သူ့တိုက်ခန်းထဲမှာပဲသူ့ကိုယ်သူပြန်ပိတ်ထားပြီး နာကျင်ခံစားလို့ရသမျှကိုသူတစ်ယောက်တည်းသာကြိတ်မှိတ်ပြီးခံစားချင်တာပါ ဒါပေမယ့်လူတွေနဲ့တော့သူမဟာလုံးဝမထိတွေ့၊မဆက်ဆံချင်တော့ပါဘူး အဲဒီလိုစိတ်ခံစားချက်တွေကိုဆန့်ကျင်နေတာကတော့ ပဲရစ်ရဲ့လမ်းသွယ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် သိပ်မကြာခင်မှာပဲသူမဟာသူငယ်ချင်းဟောင်းဖြစ်သူအိုလီဗီယာနဲ့ ပြန်တွေ့မိရာကနေတကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ကိုပြန်ရောက်လာမလား ဆက်ပြီးထွက်ပြေးနေမလားဆိုတာ... File Size : (1.3 GB) Quality : Blu-Ray 1080p Running Time : 1h 38min Format : Mp4 Genre : Drama, Music, Mystery Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : Bluray.1080p.x264-RSG Translated by Noe Encoded by sithu
IMDB: 7.9/10 88,862 votes
IMDB: 7.6/10 63,643 votes
IMDB: 8.1/10 89,915 votes
IT (2017) မိုးတှတေဖှဲဖှဲရှာနတေဲ့မနကျခငျးတဈခုမှာ ၅နှဈခနျ့အရှယျ ဂြျောဂြီလေးဟာ သူ့အဈကိုမပါဘဲအပွငျသှားရဖို့ဖွဈလာခဲ့တယျ... သူ့အဈကို ဘီလျကလညျးခြောငျးတှဆေိုးပွီးဖြားနခေဲ့တာကိုး... အဈကိုမပါလို့မသှားခငျြသှားခငျြဖွဈနတေဲ့ဂြျောဂြီလေးကို ဘီလျက လမျးမှာဆော့သှားဖို့စက်ကူလှလေေးလုပျပေးပွီး နှဈသိမျ့လိုကျတယျ... ဂြျောဂြီလေး အိမျကထှကျလာပါပွီ... မိုးကာ အင်ျကြီအဝါရောငျလေးနဲ့ပေါ့... ဂြျောဂြီလေးသာ ပွနျမလာနိုငျတော့မယျမှနျးကွိုသိခဲ့ရငျ ဘီလျ့အနနေဲ့ဘယျလောကျဖြားဖြားလိုကျသှားမိမှာပဲ… ဒါပမေယျ့ အနာဂတျကိုကွိုမသိနိုငျတော့လညျး ဘီလျ့ခမြာ ခြောငျးလေးတဈဟှတျဟှတျဆိုးရငျး မိုးရထေဲထှကျခှာသှားတဲ့ ဂြျောဂြီလေးကိုလှမျးမြှျောကွညျ့ရငျးကနျြခဲ့ပါတယျ… လမျးတဈလြှောကျ မိုးရစေီးကွောငျးထဲမှာ လှလေေးကို ဆော့ရငျးထှကျသှားတဲ့ဂြျောဂြီလေးဟာ အဲ့ဒီနကေ့အိမျ ပွနျမလာခဲ့ပါဘူး… နောကျနတှေ့လေညျး ပွနျမလာခဲ့ဘူးလို့ပွောရငျ ပိုမှနျမှာပေါ့… ဘီလျတဈယောကျဟာ အခြိနျတှကွောလာပမေယျ့ ဒီကိစ်စကိုသူ့အပွဈလို ခံစားပွီး သူ့ညီလေး ပြောကျသှားနိုငျမယျ့နရောကိုမှနျးဆပွီးမိဘတှမေသိအောငျ ကွိတျရှာနခေဲ့တယျ… နှကြေောငျးပိတျရကျ မစတငျခငျတဈနမှေ့ာတော့ စိုးရိမျတကွီးမကျြနှာနဲ့ ကွငွောစာရှကျတှလေိုကျကပျနတေဲ့ အနျတီကွီးတဈယောကျကိုတှလေို့ကျရတယျ…အလို... အခနျးထဲကကောငျမလေး ပြောကျသှားတယျဆိုပါလား နောကျနတှေ့မှောလညျး လူပြောကျကွငွောစာရှကျတှေ တဈရှကျပွီးတဈရှကျပလူပွနျလာပွီ… ဒယျရီမွို့လေးမှာ ကလေးပြောကျတာတှေ မြားလာပါလား… ဘီလျသံသယဝငျလာပါပွီ… သူ့သူငယျခငျြးတှအေဖှဲ့(ကြောငျး မှာအမွဲအနိုငျကငျြ့ခံရတဲ့ Loserအဖှဲ့)နဲ့ စုံစမျးလိုကျတဲ့အခါ ၂၇ နှဈကွာတိုငျး တဈဖနျပျေါလာတတျတဲ့ကလေးစားလူရှငျတျော Pennywiseအကွောငျးကို သိလာခဲ့တယျ လှနျခဲ့တဲ့၂၇နှဈကလညျး တဈမွို့လုံးပွုတျအောငျ စားခဲ့တဲ့သကျသတှေလေညျး တှလေ့ာခဲ့တယျ… ဘီလျနဲ့သူ့သူငယျခငျြးတှကေိုယျတိုငျကလညျး ခွောကျလနျ့မှုတှေ အမြိုးမြိုးနဲ့ကွုံလာရတဲ့အခါ… သူတို့ကိုယျတိုငျအတှကျနဲ့ ကနျြတဲ့ကလေးတှေ အန်တရာယျကိုကာကှယျဖို့ Pennywiseကွီးရှိရာ…အိမျပကျြကွီးအောကျခွကေ ရတှေငျးပကျြကွီးဆီခြီတကျလာကွတဲ့အခါမှာတော့…… ''ငါအိမျပွနျရောကျတိုငျး ဂြျောဂြီရှိမနဘေူး… သူ့ရယျသံလေးတှလေညျးမကွားရတော့ဘူး… သူကစားနကြေ ပေါကွောငျကွောငျ ...